Maxaa lagu gorfeeyay shirkii Banbaxa golaha wasiirrada Soomaaliya? | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maxaa lagu gorfeeyay shirkii Banbaxa golaha wasiirrada Soomaaliya?
Maxaa lagu gorfeeyay shirkii Banbaxa golaha wasiirrada Soomaaliya?
Wasiirrada xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay kulan ku qaatay hoteel ku dhex-yaalla garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaas oo uu shir guddoomiyay ra’iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble.
Markii laga soo tago in diirada shirkan uu ahaa arrimaha doorashooyinka, waxaa kaloo looga hadlay arrimaha amniga, kobcinta shaqaalaha, daynta cafinta, horumarinta bulshada, caddaaladda iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee 100-ka maalmood, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa kasoo muuqday goobta ay shalay ay ku shirsanaayeen golaha wasiirrada Soomaaliya.